Uyini umsebenzi weketanga lube? - Chain
Main > Chain > Ukuhlolwa kwe-chain lube - incwajana ebanzi
Ukuhlolwa kwe-chain lube - incwajana ebanzi
Uyini umsebenzi weketanga lube?
Kuhleuchungechunge lubeingabhebhethekisa i-amaketangaukuzibandakanya nama-sprocket wekhasethi namaketanga, nokugcina ukusebenza kokushintsha okufanele. Kuyasiza futhi ukuvimbela ukugqwala futhi kunciphise ukungqubuzana nokugqoka okushaywayo.31 2021.
Namuhla sizobheka ngokulula izinto zokugcoba ezahlukahlukene esingazisebenzisa kumadrayivu ethu nokuthi kungaba namiphi imiphumela. Ngakho-ke nginqamula iketanga lami, engilisebenzisile laba ngamasampula ambalwa. Futhi sizosebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zokugcoba kuwo futhi siwathumele ezintweni eziningi zangaphandle. (I-Dramatic Music) Okokuqala ohlwini lwethu lwezinketho ze-lube yi-Wet Lube.
Ngakho-ke ebhodleleni lapha lithi iketanga lizohlala libushelelezi futhi limanzi ezimweni ezinodaka. Ngakho-ke cabanga ngempela ngobusika bakho, lapho kusebenza khona. Igijima njengoketshezi futhi ivame ukunamathela cishe njengaleyo kusuka kumafutha amnyama ahleli ku-drivetrain yakho, imvamisa kungenxa yalokho.
Iphephe kakhulu, iqinile kune-lubricant eyomile, kepha ingaba yindida kancane, ikakhulukazi uma ufaka isicelo esiningi kakhulu. Okulandelayo sinezinto zokugcoba ezomile, ngakho-ke lokho kuyizimo ezinothuli zesithambisi sakho esomile. Ngakho-ke ngicabanga ngezinyanga zasehlobo lapho kungekho ukungcola nodaka okungako endleleni a) Manje kuhamba ihlanzekile kuneWet Lube, kepha ayihlali isikhathi eside uma ibhayisikili lakho limbozwe udaka, isihlabathi, noma amanzi Slayida lokho okuhleli phezulu kuketanga.
Manje sizosebenzisa iqoqo lamasampuli ethu ngaphandle kokugcotshwa, njengokulawula. Kepha kokunye okubili ngeke sisebenzise izinto zokuthambisa eziqondene nedrayivu, kepha izinto esizibuzwa kakhulu. Ngakho-ke ukusuka ephepheni sinamafutha omnqumo.
Imishini yokuqala nayo, njengoba sizizwa sifana. Okulandelayo, sinezilungisi zawo wonke umuntu Izikhalazo, ngqo phezulu ngamanzi angcwele ne-gin ne-tonic, impela yi-WD-40. Manje lokhu kusengukukhetha kwabanye abagibeli bomgwaqo abafuna iketanga elisebenza kahle elihlala lithule, uma kuphela imizuzu engaba ngu-30.
Uma ukholwa noma ungakukholwa, sihamba ngomkhumbi ominyene lapha, kepha akuyona iNASA ngokuphelele. Ngakho-ke sinebhokisi lethu elilula lokudonsa engizofaka phakathi ukungcola, udaka noma nje amanzi ngoba sizosebenzisa amaketanga ethu, ngethemba lokuthi sizonikeza amaketanga isikhathi sokuvumela i-lubricant yabo isebenze ngokwanele ukuze kubonakale ngethemba ukuthi uzoziphatha kanjani emhlabeni wangempela. Umehluko omkhulu uma uqhathaniswa nalokho ongakwenza ngebhayisikili lakho ukuthi ngeke sisule igrisi eyedlulele.
Siyethemba ukuthi lokhu ukwenza ihaba noma iziphi izinzuzo noma amabhonasi avela ku-lubricant uqobo. Manje usungasho ukuthi nginalolu hlobo lwezinto eziphakeme zokuhudula othola ukuthi zivala i-drivetrain yakho, futhi ngokuthembeka konke, angizukuzama nokuzama. Ngiyethemba ukuthi lesi yisivivinyo esilula nje ukukubonisa izinzuzo nezingozi zokuthanjiswa ngakunye, neqembu elihlakaniphile njengawe ongalucacisa ulwazi oludingayo ngaphambi kokulufaka esimweni esithile sangempela lapha ezitsheni zami ezincane zeTupperware enginazo mhlawumbe amagremu angamakhulu ambalwa odaka oluhle kakhulu lwesiNgisi engingaluthola.
Yebo, ngithi udaka, kungukungcoliswa okungaphezulu, kwesihlabathi njengamanje. Futhi ngasikhathi sinye, ngimane ngidlule ezinhlotsheni ezahlukahlukene ngifaka iketanga. Ngakho-ke ngiqala ngeDube Lube.
Ukungena nje, angesabi. Bese kuthi (ukuxokozela) ngicabanga nje ukuthi yisixuku. Ngakho-ke ngizokumba iketanga lami.
Izingcezu ezincane zokugcoba. Ngizoyishaya kancane. (Knock) Ngakho-ke ngizokufaka phakathi lapho futhi ngenze okufanayo nge-Wet Lube.
Kuyenzeka. Ibhokisi livaliwe futhi uyahamba! (ngiyahayiza) Ngakho-ke ngizovele ngidlule kuwo wonke amanye amaketanga bese ngiphinda inqubo efanayo. Ngaphezu kokungcola, manje sengifaka ingxenye yamaketanga ohlobo ngalunye lwento yokugcoba emanzini anodaka bese kuthi emanzini ahlanzekile ukukhombisa imiphumela ehlukene yokuvikela yohlobo ngalunye lwento yokugcoba kuye ngemvelo. (ukuklabalasa) Okuwukuphela kwensimbi engavunyelwa ukuyidlala esikoleni kwakungama-maraca, ngakho-ke ngibe nokuzijwayeza okuningi kuma-das wokuprakthiza, bengingengethenjwa nganoma yini ebiyinkimbinkimbi ngokweqile. (ukuxokozela) (umculo onamahloni) Ngakho-ke ngizozishiya lezi zenze izinto zazo ngobusuku obubodwa. Ngizobuya kusasa ukuyobona engikutholayo ngicabanga ukuthi bazophepha angicabangi ukuthi basangidinga lapha futhi sizobheka kusasa ngosuku olulandelayo.
Ngakho-ke wusuku olusha e-GMBN Tech HQ futhi sizobheka amaketanga ethu, ngakho-ke ekuqaleni ngiyamangala ngokushesha ukuthi ngingabe ngisabona ukugqwala. Futhi lokho kuhambisana nawo wonke umuntu. Kepha ngicabanga ukuthi ngithini kulokho, lapho ngibalahlisa ngicabanga ukuthi i-degreaser kungenzeka inezinto ezithile zokuvikela ezisele futhi akukhona ukuthi uzomise ngokuphelele.
Ngazisula futhi ngazama nje ukuzenza zome ngangokunokwenzeka. Kepha ngicabanga ukuthi lesi sidilizwa sinezici ezithile eziyinsalela. Ngakho-ke ake siqale ngale yethu eyomile.
Manje okomile, okunothuli empeleni, niyazi, kunothuli oluthile kukho. Kepha uthuli uqobo lwalo, angithi ludaka ngokwalo lome ngokuphelele futhi lunyibilika okwempuphu. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi nge-chain flick encane noma lapho i-drivetrain iqala ukushibilika ngicabanga ukuthi lokho kuzowa ngokuphelele.
Futhi leli bhantshi lihlabeke umxhwele impela uma kubhekwa ukuthi akufani nokuthi sisule okweqile ngemuva kwalokho. Lokho kwaqhubeka kuconsa kuDry Lube. Iya kulowo onodaka.
Ngokufanayo futhi, uma kungenzeka, empeleni ngicabanga ukuthi kususe iDube Lube impela. Ukuyibuka noma kunjalo. Futhi-ke amanzi uqobo, awu, abukeka emuhle futhi ehlanzekile.
Akukho ukugqwala okusalayo noma okunye okunjalo. Akuzwakali sengathi kunamafutha amaningi asele. O, kukhona okuncane, okuncane, mhlawumbe okucwebezelayo okuluhlaza kuso.
Ngokulandelayo siya kwi-Wet Lube yethu. Ngakho-ke yomile ngokushesha. Ngakho-ke umehluko, kufana nokuthi uvalwe njengamafutha axubene nothuli.
Ukushiya ngemuva uhlobo oluthile lomswakama okugcwele ukungcola. Manje, njengoba uhamba nge-drivetrain yakho, uyazi ukuthi izinto ezinjengokuxhunywa kwakho ngamaketanga zisusa lokho kungcola kuzixhumanisi zakho. Kepha lowo ngumsebenzi isixhumanisi samaketanga okufanele senziwe, okungasho nje ukusebenza kahle okuncane, kepha ngokuyisisekelo kuzoguga noma kudlule i-drivetrain yakho.
Okulandelayo, sibheka udaka, futhi empeleni lumi kahle. Uma kubhekwa ukuthi kwakungamanzi amabi, anodaka. Empeleni kunenani elifanele lamafutha okusalalisa asele kuwo, futhi kungihlaba umxhwele impela ukuthi kungathatha malini ngaphandle kokuyivimba ngokuphelele.
Ngokwamanzi, ibukeka futhi izwakala sengathi igcotshisiwe okuyiqiniso ngempela, okuhlaba umxhwele ukuthi ingakanani amanzi ekwazi ukuwaxosha. Ngokulandelayo siya kwiVolksmeister WD-40, efana ne-Dry Real Lubricant. Kubonakala sengathi kushiye impuphu encane.
Futhi empeleni, kufanele ngithi i-WD-40 ibukeka ingenye yezinto ezihlaba umxhwele kakhulu ebhodini. Kukuyomile, bekungekho okuningi. Odakeni isabukeka iyinhle futhi inefilimu elula yokuvikela.
Futhi emanzini kubukeka njengeketani elisha sha sha. Ngicabanga ukuthi into ephathelene ne-WD-40 kumane ishise i-powertrain yakho ngokushesha. Akukhona ukuthi akuyona into yokugcoba esebenza kahle kakhulu, ayihlali isikhathi eside kangako ngoba, akusikho lokho eyayenzelwe kona.
Ngokuqondene namafutha omnqumo, ngiqonde ukuthi isivivinyo sonke esidinga ukusazi. Namanje kunuka okumnandi ngakho-ke. Kodwa kungenzeka ukuthi, ngingasho ukuthi kuvaleke kakhulu, indlela uwoyela oxutshwe ngayo nodaka, lolo daka lusamanzi ngendlela emangalisayo.
Ngisho neLet Lube, udaka luhlobo oluthile, awu, uma belusothulini, akulona uhlobo oluthile lwesithombo semifino esimanzi olumisiwe. Kepha empeleni, yebo, uhlobo lomile futhi kungenzeka luvele othulini. Ngenkathi lokhu kukuhle kakhulu kusesimweni soketshezi olunodaka.
Futhi ngokufanayo, ngamanzi anodaka kusekhona uwoyela omncane kuwo. Yebo, kusalokhu kunuka njengayo. Kepha yebo, kuhle.
Bese kuthi ngalokho, amanzi nje, abone ukuthi isabukeka njengeketanga elisha elihle impela. Kepha manje uwoyela namanzi awahlangani ngakho-ke lokho akumangazi kakhulu kimi. Futhi-ke, ngamaphethini wethu wokuhlola, njengoba ubungalindela, ngiqonde ukuthi, mhlawumbe indawo ayisho indaba eningi kakhulu.
Kepha lawa ngamanzi ethu anodaka. Futhi ungezwa nje ukuqina kwe-The Links. Ungacabanga ukuthi iyakhula njengoba uhamba phakathi kwama-pedals.
Kulungile, impela. IDry Lube nakanjani ibonakala igqoka kangcono kulezi zimo ezomile. I-Wube Lube, kuhle, kuya ngezimo ezimanzi kangcono.
Kepha bazolenga ngaphezulu. Ngeke zishe amandla akho we-powertrain khona manjalo. I-WD-40 ibukeka imnandi ngokuphelele, njengoba ngishilo, kepha ngikhathazekile ngokuthi izohlala isikhathi esingakanani lapho.
Amafutha omnqumo anuka kamnandi kepha ngikhathazekile ngokuthi angahlala isikhathi esingakanani lapho. Futhi-ke, ukuntuleka kwe-lubricant isiyonke, akukwenzi lukhulu nakancane. Futhi kunokungqubuzana okuningi phakathi kwalezi zixhumanisi.
Ngikhathele yonke intatheli enzima eqhubeka lapha futhi ngifuna ukubuyela emabhayisikili. Bheka le ndatshana engiyenze ngokusetha okungenamanzi kanye nama-hacks. Yindatshana ende impela kepha inhle kakhulu futhi ngincoma ukuyibuka.
Futhi sizokubona ngokuzayo, ngiyabonga kakhulu.
Yikuphi okokuthambisa okungcono kakhulu kwamaketanga amabhayisikili?
Amalayidi kabhayisikili amahle kakhulu- ukukhetha kwethu
I-Rock N Roll Gold.
Silca Super ImfihloChainILube.
Okuluhlaza okotshaniAmafuthaILube Elimanzi.
Qeda Umugqa Omanzi.
ICeramicSpeed ​​UFO Ceramic lube.
Ukungezwani kweTru Isimo Sezulu Sonke.
Molten Speedwax. Ingcinaamaketangathatha umsebenzi owengeziwe, kepha uwufanele umzamo.
Isikweleuchungechungelube. Ukusebenza okuphezulu, i-lube esuselwa ku-wax.
Amafutha eLube, umngani othembekile, futhi ngokunembile umngani oqotho we-triathlete, ngoba ngaphandle kwawo, wonke amakhilomitha esiwajikelezayo ngebhayisikili lethu angabhubhisa uchungechunge lwethu lokushayela. Kholwa noma ungakukholwa, sinezindlela eziningi ezahlukahlukene zokuthambisa amaketanga ethu; noma ngabe sifuna ukuguquguquka okungcono kwegiya, ukwandisa impilo yezingxenye zethu zamaketanga nezamabhayisikili, noma nje sifuna ukuthola ukusebenza kahle ngokwengeziwe lapho sihamba ngebhayisikili, lapho-ke singenza inzuzo ephawulekayo ngokuthambisa amaketanga ethu ngokufanele. Ngakho-ke namhlanje ngizokhuluma ngokuthi iluphi ugcobo lwamabhayisikili okufanele silusebenzise nokuthi nini. (i-dramatic music) (umculo olula) Iningi labakhiqizi livamise ukuhlanganisa izinto zokugcobisa zibe esinye sezigaba ezimbili, okungamanzi okuthambisa futhi omile.
Ungahle ucabange ukuthi lokhu kuyiqiniso ngohlobo oluthile lwesimo okhuluma ngaso. I. E. yomile kusimo sezulu esihle sasehlobo futhi imanzi esimweni sezulu esibuhlungu sasebusika.
Futhi ingxenye enkulu, uqinisile. Kunomehluko phakathi kwalezi zigaba ezimbili zokugcoba. Manje into eyomile isho into yokugcoba ye-lubricant.
Futhi lokho kusebenza ngempumelelo kuketanga lwakho njengoba ushayela futhi, ikakhulukazi, kunguhlobo lwe-waxy of deposit. Manje lezi zokugcoba ezomile zifakwa eketangeni lakho njengoketshezi ngaphambi kokuba kuthathe amahora ambalwa ukoma. Ngakho-ke gcina lokho engqondweni ngaphambi kokuthi uqale uhambo lwakho.
Into enhle nge-lubricant eyomile ukuthi ayihehi ukungcola okuningi noma uthuli nemfucumfucu lapho uyisebenzisa, ngakho-ke ilungele izinsuku ezomile zasehlobo. Okubi-ke nokho ukuthi kufanele isetshenziswe ngokufanelekile, ikakhulukazi uma ngabe ugibele ngosuku olumanzi noma ngabe uphume esihlalweni uhambo olude impela futhi iyoma nje futhi iyancinza. Futhi akekho umuntu othanda ngempela ukuba naleyo chain eyomile encanyana ekugibeleni ibhayisikili.
I-lubricant emanzi kwakuyi-lubricant yokuqala yokuzikhethela. Eqinisweni, iningi lemikhiqizo lisebenzise okuthile okubukeka kufana nenjini yamafutha enjini. Ukungaguquguquki bekukuhle kangcono kunezigcobiso ezilula zokufafaza, eziklanyelwe ukukhipha amanzi.
Kalula nje, yayihlala isikhathi eside ngokwengeziwe futhi ihlala isikhathi eside. Futhi lelo khwalithi lihlala linezithambisi zesimanjemanje ezimanzi kuze kube namuhla ngoba zisasetshenziswa eketangeni njengezigcobiso ezimanzi, izinto zokuthambisa esikhulume ngazo, zihlala zikule fomu kuxhaxha, futhi ukungaguquguquki kuyaqina kancane, okusho ukuthi unamathela eketangeni, okusho ukuthi zilungele kakhulu izimo ezimanzi njengoba zikhuphule ukumelana nemvula futhi kuba nzima kakhulu ukugeza lapho zikuchungechunge. Manje ububi obuhambisana nokuthanjiswa okumanzi ukuthi kuheha ukungcola okuningi nokubi kakhulu kuketanga.
Ngenxa yalokho, sidinga ukuhlanza iketanga kaningi kaningi kunabalingani bethu bokuthambisa abomile. Manje, uma mhlawumbe unentshisekelo ethe xaxa ekusebenzeni, khona-ke ungahle uthande ukucabanga ukusebenzisa i-ceramic-based or wax-based lubricant on your chain. Manje lezi zihlala endaweni ethile phakathi kwezinhlobo zokugcoba ezomile nezimanzi, kepha njengakuzo zombili izinguqulo, zisetshenziswa kuloluchungechunge olumanzi kodwa zome kancane.
Lezi zokugcoba ezisindayo zisiza ukunciphisa ukungqubuzana nokuhudula phakathi kochungechunge lwakho nezinye izinto ezihambayo kunciphisa uchungechunge lwakho lokushayela. Futhi ngenxa yalokho, bazokusiza kuphela ukuthi uthole lawo mandla athe xaxa owafunayo, kepha kufanele wazi ukuthi ayabiza kancane. Akudingeki ukuthi isetshenziswe kaningi.
Sebenzisa i-Teflonor spray esuselwe kubicah njengaleli wumqondo omuhle ngempela ukugcina izinto zihle futhi zibushelelezi futhi zithule futhi. Ngikhuluma ngokukhethekile ngezingxenye lapho iketanga lingashaya khona amasongo ngaphambili noma ikhasethi ngemuva. Futhi kungumbono omuhle impela ukuskena ngaphezulu kwebhayisikili bese uthola ezinye izindawo ongalahla kuzo futhi.
Njengesibonelo, iziphethu kuma-derailleurs we-Ailleurs yethu, nezinto ezifana namabhuleki nezintambo ezishintshayo, uma ungasebenzisi i-elektroniki, kunjalo. Noma yikuphi okhetha ukuthambisa, kuzohlala kusebenza kangcono uma kufakwa kuketanga oluhle futhi oluhlanzekile, ngakho-ke kufanelekile impela, cabanga ngokuhlikihla lonke uchungechunge lwedrayivu ngendwangu noma ithawula noma okuthile okufana nakho ukuze kuhlanzwe yonke into njalo ohambweni . Futhi khumbula ukuzama ukuhlanza okujulile impela ngensipho namanzi ashisayo ngemuva kokusho ukuthi ngeSonto ngeSonto drive kwenze nabangane bakho noma iklabhu, ngethemba ukuthi le ndatshana ikusizile ngezinqumo zesikhathi esizayo ozenzayo mhlawumbe mayelana nokukhetha i-lubricant noma izimo zokugibela uzolindela kulokhu kuhamba.
Uma unezinye iziphakamiso zokuthi ungaligcoba kanjani ibhayisikili lakho ngendlela efanele sicela usazise emibhalweni engezansi. Singathanda ukuthola le. Futhi, ngethemba ukuthi uyithokozele le ndatshana.
Ngakho-ke ngicela uchofoze inkinobho ethi 'Thanda'. Futhi chofoza imbulunga bese ubhalisela ukuthola yonke eminye imibhalo yethu. Manje uma ufuna ukubona i-athikili engiyenzile mayelana nebhayisikili le-triathlon ungathola ukuthi lapha kanye nenye i-athikili uMark nami mayelana nokuthi Ukupakisha ibhayisikili lakho ingatholakala lapha.
Ufanele ukomisa kangaki i-lube lube?
Umqeqeshi webhayisikili uncoma ukuhlanzwa kanyeukugcobaidrayivu yebhayisikili lakhouchungechungeokungenani kanye ngenyanga ukugcina ukusebenza kahle nokuvikelwa. I-uchungechungefuthi i-drivetrain ngokuvamile iyizingxenye ezingcolile zebhayisikili lakho, futhi lokhu kungcola kuyizindaba ezimbi zokuphila isikhathi eside kwebhayisikili nokusebenza.
Yebo yebo, lokho kusho ukuthi yisikhathi sebhizinisi, lokho kungaxaka. Kulungile, into yokuqala sithole umbuzo ku-Andrew Reitsma mayelana nokuthambisa. Ngakho-ke uthi 'Sawubona kusuka ku-Down Under'.
Kepha ngicabanga ukuthi kungenzeka futhi ukucabanga kabusha ngezinto. Ukuzama ukuthola amakhilomitha angamakhulu ambalwa wempilo ngaphandle kochungechunge lwakho kungahle kungakufanele ukucabanga. Kepha kukhona okufanele kwenziwe nokungafanele ukwenze.
Imvamisa bengingasho ukuthi ngiphinde ngiphinde ngiphinde ngisebenzise iketanga lakho uma lomile futhi linomsindo, kepha uma kungenjalo anginandaba. Futhi-ke, maqondana nokwehliswa, ngingahle ngibukeke sengathi leyo Chain kwizixhumanisi, ngakho-ke, iphakathi kwama-roller. Ngoba kulapho iketanga liguga khona, futhi uma ligcwele amachaphaza nesihlabathi nokunye okunjalo, yilapho ofuna ukuyihlanze khona ize icwebezele njengokusha.
Nakanjani kufanele ucabange ukuthi uluhlobo luni lwe-degreaser oyisebenzisayo - ungasebenzisi amakhemikhali awukhipha ngempela, ane-asidi noma ane-alikhali a) ngakho-ke lokhu akukuhle kakhulu empilweni yeketanga lakho. Abakhiqizi abaningi bangasho ukuthi nakanjani uzohlehla. Kepha i-degreaser ejwayelekile eqondene nebhayisikili izowenza kahle umsebenzi wayo njalo.
Kepha ayikho imithetho ngoba ekugcineni kosuku lapho ushayela khona kungahluka kunalapho ngishayela khona ezimeni ezomile. Futhi uyazi, njengoba ngishilo, akunakwenzeka ukunikeza inombolo ngqo, kepha ngethemba ukuthi lokho kuzosiza esigabeni sokuphawula ngezansi. Ngakho-ke, ngokulandelayo.
Le siyithole kuTomKrouze. Igama elipholile, uTom. 'Yini empeleni inzuzo noma ukubaluleka kokuqina “Ebhayisikili? Nini, kungani ngidinga ibhayisikili eliqinile? ”Yebo, lowo ngumbuzo omuhle impela.
Kepha empeleni ngicabanga ukuthi amabhayisikili aqinile avumela indlela yokusingathwa. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi isiphetho esiqinile sangaphambili ebhayisikili lakho kuyinto enhle kakhulu ukuthi ibhayisikili lizizwe likhulu lapho likhona ekhoneni. Kepha akunandaba.
Woza. Ngakho-ke, i-FSA yenza ama-adaptha amancane. Ngakho-ke lena isuka kubakaki ongezansi we-BB386EVO, i-oreah, futhi izokwehla, lokhu kwenzelwa iSrams GXP ngqo, ngakho-ke lesi yisiphungulu semil 20 esicabanga. (22mm & 24mm) Bheka ku-inthanethi, ama-adapters ayatholakala impela, kepha ngeke ukwazi ukuguqula wonke amabakaki aphansi azo zonke izinhlobo ze-crank.
Ngakho-ke qhubeka ngokucophelela. Kepha, yebo, kukhona ongakwenza. Kulungile, ngakho-ke ngokulandelayo sikuthole lokho kuPatrick Joseph. 'Cishe zonke izitolo zamabhayisikili zikutshela ukuthi' ubuyise ibhayisikili lakho elisha emuva kwamasonto ambalwa ukubuyisa amagiya akho ', ingabe lokho kuyizaba zokukuthengisela izinto eziningi?' Cha, akunjalo neze.
Izintambo, ake sithi ziyelula, izintambo ngokwazo aziluleki, kepha lonke lelo cala nezinto zingacindezela phansi futhi lokho kungacasula amagiya akho nakancane into engenziwa nasekhaya. Sinendatshana enhle ngale ndaba. Futhi empeleni sidlala kancane kokuguqula i-cogin, uma ushintsha amagiya amagiya ngeke akhonjwe.
Yini ngasikhathi sini, bese kuthi lapho zihamba kabi khona. Futhi inqubo yokukhomba izinkomba ukulungisa lokho bese uhambisa i-derailleur endaweni. Ungayilungisa kalula kalula.
Kulungile, sinombuzo owodwa omuhle impela ngaphansi kwe-athikili ye-youtube yangesonto eledlule, lena evela ku-leecbracing, noma i-lee cb racing, engaqiniseki ukuthi yimuphi. Kunoma ikuphi, babuza: 'Kungani ochwepheshe behlala phambili kangaka?' Ngokuyinhloko, kungenxa yokuthi uma uzoba nolaka kakhulu futhi usheshe kakhulu emigwaqeni eyisicaba, khona-ke ufuna ukujula kakhulu. Futhi lapho ujula impela, kusho ukuthi izinkalo zakho ziyajikela phambili, ngakho-ke, ukuze uhlale ukhululekile futhi ukhiphe amandla, uzofuna nokushelela phambili.
Empeleni akuyona into entsha. Sekuyisikhathi eside kabi kabi futhi empeleni yingakho sithole ibinzana kusishisi sangemuva. Okuyinto yakho enhle mayelana nokuhamba ngebhayisikili, kuvela ngesikhathi lapho izinsimbi zaxoshwa khona futhi abantu ababehleli esihlalweni baqhubekela phambili bahlala ngokoqobo ku-rivet ngaphambili lapho, okusha sha manje ukuthi izikhundla ziyajula futhi enwetshiwe ngaphambili ukuze izihlalo ziqhubekele phambili futhi zithambekele phansi.
Futhi uMatt unendatshana enhle ngempela impela eyenziwe kuTour wokugcina waseDubai futhi idlala ngomzuzwana, kufanelekile ukufunda okwengeziwe - izinzuzo zaziwa ngezikhundla zabo zokugibela ezishayayo, kepha muva nje kunomkhuba owandayo wokuqisa . (umculo othambile) Yebo, uma ucabanga ngalokho, ibhayisikili lami liqinile futhi ngalokho ngiqonde ukuthi kunomehluko omkhulu phakathi kwesibambo nokuphakama kwesihlalo, njengasemjahweni wami bese uliqhathanisa nesimo esinolaka kakhulu sikaJohann van Zyl futhi uzokwazi ukuthi ngiqonde ukuthini. Manje sesikhulume nabashayeli abambalwa mayelana nokuthi kungani bebonakala bethatha izinto ngokweqile. - Kulungile-ke, isikhathi esisheshayo semibuzo nezimpendulo manje.
Njalo cishe yingxenye ehamba kancane kunayo yonke i-athikili, kepha njengoba u-ThatsSoNathan ephawule ngesonto eledlule, 'Isilinganiso Sesivinini Incazelo Akunandaba' ngesikhathi se-Rapid Fire Q&A. 'Ngakho-ke, ngiyabonga ngalokho, Nathan. Umbuzo wokuqala, uLiam Bradley.
Yebo, unenkinga ngesondo lakhe langemuva. Kwesinye isikhathi kusebenza kahle kuye ukuthi aqhubele phambili futhi aqhubekele phambili. Kwesinye isikhathi izingalo ezinyakazayo ziyazula nje kungenzeki lutho, konakelephi? Hhayi-ke, lokho kuyisikhalazo esivamile lapho isondo lakho langemuva liguga impela futhi liyi-freewheel futhi likuvumela ukuthi unganyatheli uphume bese uyahamba futhi.
Ngokuyisisekelo bangakwazi ukuvaleka kancane nge-gunkand kanye ne-crap ejwayelekile ngokuhamba kwesikhathi, kanjalo nezicucu ezincane ezivuthayo ezikuvumela ukuthi umise ukuvela, ngamafuphi. Amathuba wokuthi ungayilungisa, ngakho-ke udinga ukubheka iwebhusayithi yomkhiqizi wakho ukuthola iziyalezo, kepha kunethuba lokuthi i-freewheel yakho ingahle ingalungiswa ngakho-ke ingahle ibhajwe uqiniseke ukuthi uyayihlola kuqala ku-inthanethi. Iningi lamabhayisikili e-freewheel esinawo lapha e-GCN-Bikes ngicabanga ukuthi angalungiswa.
Ngakho-ke ngethemba lokuthi unenhlanhla. Nginesiqiniseko sokuthi kuzoba nguwe. Kulungile sinenye ye-oreosaysb00 manje, lelo igama elixakile. 'Kungani ochwepheshe begibela ngamathayi angama-25c uma amathayi angama-28c esindisa ama-watts amabili kuya kwamathathu ngesondo ngalinye?' Othile usevele angakuphendula kahle lokho.
Lennart Meinke, othe: 'Kancane futhi kuyinkambiso enkulu.' Futhi ngizokutshela ukuthi yini, lokho akukude neze neqiniso. Kwesinye isikhathi kuthatha isikhashana ukucabanga kwesayensi ukungena empeleni kwiProoton Peloton.
Ngoba ekugcineni kosuku, ukuthi into izwa kanjani nokuthi abantu bacabanga ukuthi kubaluleke kakhulu kanjani, futhi. Futhi izinzuzo eziningi zikholelwa ukuthi ama-28s ahamba kancane kunama-25s, noma ngabe idatha ingasho okunye. Kodwa-ke, ama-28s asinda kancane kunama-25s futhi angaphansi kwe-aerodynamic.
Ngokusobala kukhona indawo engaphezulu yokweqa umoya. Kepha ngiyasola ukuthi sizobona izinzuzo zisebenzisa ama-28s amaningi, ikakhulukazi njengoba amasondo ebanzi nawo. Ngokusobala, lokhu kususa ezinye zezingqinamba ze-aerodynamic.
Kulandela lokho sinombuzo ovela kuma-Amaury lapha owathi usanda kuthola iCanyon Aeroad entsha yokugibela okusheshayo Shesha, uncoma ini ngobukhulu bamathayi, ama-25 noma ama-28 mil, i-Continental GP 4000sII? Hhayi-ke, uma unikezwe engisanda kukusho, ama-28s azongena kahle futhi uma ugibela itiyela elibi kakhulu, elicasulayo ku-50 psi lapho ibhayisikili lakho lizoqengqeleka njengokhaphethi womlingo futhi uzohamba ngempela, ngokushesha okukhulu. Kodwa-ke, uma ushayela ku-asphalt ebushelelezi ne-aerodynamics iyikho konke futhi ijubane lakho elijwayelekile liphakeme kakhulu, khona-ke ungahle ufune ukuya ku-25c, kepha nakanjani ngizohamba ne-28con, nakanjani. Kulungile, ngakho-ke manje sinemibuzo eminingi futhi, yonke ehlobene.
Ngeshwa, uDan Fish uqeda nje ukuphula ithambo lakhe futhi ufuna ukwazi ukuthi angamsebenzisa kanjani iTurbo Trainer yakhe ukugcina ukuqina akuyo ngenkathi esenesikhathi sokululama. Ngakho-ke nakanjani nomqeqeshi we-turbo futhi akudingeki ukuthi uhlale isikhathi eside kangako. Bheka izingobo zomlando ze-GCN, izikhathi zokuqeqesha.
Futhi uma ngabe wenze omunye wemizuzu yethu engama-20 noma engama-30 njalo ngosuku, uzothola ukuthi uhlala ulungile. Kuyamangaza ukuthi kuncane kangakanani okufanele ukwenze ukuze uhlale uphilile, noma ngabe kunzima kakhulu ukuzilolonga kwasekuqaleni. Ngempelasonto uStephen Cummings unqobe iBritish National Road Race Champs kanye neBritish National Time Trial Champs ngemuva kokungashayi ngeminyaka ngoba elimele kakhulu ngemuva kokuwela eTour of the Basque Country.
Futhi wakwenza konke ukuqeqeshwa kwakhe eZwift cishe kuze kufike kwaboHlanga ngokwabo, empeleni. Kufaka nokugibela okuhle kwe-punchy ngamahora amane kanye. Ngakho-ke uma wena noma ungenayo leyo ndlela nomqeqeshi ohlakaniphile, okudingayo izinzwa ezimbalwa nje, mhlawumbe uZwift angaba yimpendulo yakho nge-collarbone ephukile njengoba kwenza ochwepheshe abaningi njengamanje.
Xhumanisa ngokuhlanzekile embuzweni olandelayo othunyelwe nguSanresh Shedekar othi i-FTP yakhe emgwaqweni ngama-watts angama-245 kepha kuZwift i-FTP yakhe yehlela kuma-watts angama-205, uhlupheka kakhulu, singamtshela ukuthi kungani? Okufanele ukuthi Well, kunezizathu eziningana zokuthi kungani i-FTP yakho iphansi kancane ngokujwayelekile, kepha esinye sezikhulu empeleni ukushisa ngoba imizimba yethu ayikuthandi ukushisa kakhulu futhi nangcono impela ngaphandle kwemiphumela yokupholisa Abalandeli bomoya phambi kwakho, uzothola ukuthi i-FTP yakho mhlawumbe iyacwila kancane. Ngakho-ke yingakho. Ungazama ukuqeqeshelwa indawo enomoya, nabalandeli abaningi, lokhu kuzosiza impela, kepha inqobo nje uma uziqeqesha futhi uzihlole endaweni efanayo.
Ngakho-ke uma uyihlola njalo ngaphandle noma ngaphakathi njalo, empeleni akuyona inkinga uma ihlala ingama-watts angama-35 ngaphakathi ngaphakathi. Kungukuthi uyazi ukuthi kungenxa yokuthi uyashisa futhi ungavele ukushiye lapho. Kepha, umbuzo wokugcina oxhunyiwe, usukulungele lokhu? Kulungile, B.
URyder uthi, 'Sonke sizwile ngokuqeqeshwa okuphezulu, ingabe ikhona into efana nokuqeqeshwa kokushisa?' Yebo ikhona. Yebo, ungazivocavoca ukuze ube ngcono lapho kushisa. Ngakho-ke uma uhlala endaweni ebandayo futhi emanzi yasemaphandleni eNgilandi, ngokwesibonelo, kepha uqeqeshela umcimbi owenzeka ezweni elihle, elishisayo nelinelanga, lo mbono omuhle ngempela ukuthola imfudumalo ngaphambi kokuba uhambe.
Futhi akudingeki wenze okuningi kakhulu. Ngakho-ke ngenkathi ngigijima ngatshelwa ukuthi ngenze umsebenzi wokuzivocavoca nge-turbo, hhayi ngamandla, ngishayele nje, kodwa egumbini elishisa kakhulu, elinomswakama. Mhlawumbe ngisho nokugeza kwakho.
Ngicabanga ukuthi uMat wakwenza kanye egalaji lakhe. Futhi inqobo nje uma ujuluka, kwenze ihora elilodwa ngosuku, izinsuku ezinhlanu ngosuku ngaphambi kokuhamba, lokhu kufanele kukuhambisane nokushisa. Ngakho-ke qhubeka, uqeqeshe ukushisa.
Ilungile. Kwenzeka kanjani lokho nge-Quickfire ngaleso sikhathi? Mhlawumbe akusheshi kangako, kodwa ngethemba ukuthi imibuzo iphendulwe kahle, futhi ngicabanga ukuthi lelo iphuzu. Singahlala sikuqamba kabusha, sikubize ngokuhlukile.
Okulandelayo sinombuzo ovela kuGabriel Blanchfield. Ine-creak engajwayelekile evela endaweni yayo eyi-crank. Akukho monakalo obonakalayo, ibhayisikili ligcinwa kahle futhi livela kuphela uma seliseringi enkulu.
Ngiyazwelana nawe ngoba ukuthola amasondo we-creaky kungaba inqubo ekhathazayo. Kahle, ibhayisikili likaLasty lilenga eduze kwami. Ngakho-ke, uma iqhuma lapho usendandeni enkulu, kungenzeka ukuthi kungenxa yokuthi ubeka nje torque ethe xaxa ngebhayisikili ngakho-ke iyakha.
Kungaba ngamabhawodi wakho wamaketanga, ngakho-ke ngingahlongoza ukuthi ubheke la, uqiniseke ukuthi wonke aqinisiwe. Yize bengajwayele ukwenza umsindo we-creaking, bathambekele ekwenzeni umsindo wokuchofoza njengoba benza. Kungaba ubakaki wakho ophansi kakhulu, kodwa ngaphambi kokuthi wehle lo mzila bese uya ngaphesheya, ngingahle ngiphakamise ukuthi ubuke i-athikili esinayo emayelana nokuthola ukuqhuma kwebhayisikili lakho.
Sibe sesifanele ukwenza okunye okuningi ku-athikili, ngoba kunezimvume eziningi ezahlukahlukene. Isibonelo, ngibe ne-creak eyenzekile. Nganginesiqiniseko sokuthi iqhamuka kuma-crankset ami futhi njalo lapho ngehla esihlalweni bese kuvela ukuthi kwakungukukhululwa kwami ​​ngokushesha.
Angikudlalisi, kodwa asihambe. Kulula kakhulu ukusebenzisa kunabakaki abaphansi. Noma kunjalo, i-athikili manje iyadlala, kuhlole.
Ibhayisikili elichofozayo, elikhalayo liyacasula kakhulu, futhi lingalimaza ukuhamba kwakho ngokujwayelekile. Alikho ibhayisikili elingavikelekile esiqalekisweni, ngisho nezithuthuthu eziphezulu kakhulu zisengozini. Manje, ngaphezu kokumosha ukuhamba kwakho, kungaba uphawu lwento ebucayi kakhulu.
Isibonelo, lapho i-carbon yonakele futhi isizokwehluleka, ingakhipha umsele omkhulu. Ngakho-ke kuhlale kungumqondo omuhle ukunaka umsindo, noma ngabe ungakwazi ukumela umsindo. Random Bike Trips ubuze umbuzo omuhle impela ngaphansi kombukiso wesonto eledlule. 'Yini indawo ekahle noma i-angle yokulungisa izibambo zakho? ezithambekele kancane - kanti ezinye zibheke phansi.
Yebo, okuningi kuncike ekubunjweni kwama-handlebars akho, kepha futhi nakokuthandayo. Futhi empeleni, kungashintsha ngokuhamba kwesikhathi. Imayini impela inayo.
Ebhayisikili likaLasty lapha, kukhona isibambo esihlanganisiwe nesiqu. Ngakho-ke akanakho ukukhetha futhi uyabona ukuthi uTrek uthathe isinqumo sokuthi leli yi-engeli efanelekile. Futhi empeleni nami bengizokwenza lokho.
Izinto ezimbili okungenzeka ufuna ukuzihlola. Okokuqala, i-engeli yesibambo eceleni kwekhava yakho yamabhuleki. Ngakho-ke, uyayithanda uma yehla noma uthanda ushintsho olubushelelezi? Iningi labantu manje livame ukuba nenguquko ebushelelezi.
Enye into ukuthi, ungakwazi yini ukubamba kahle amathonsi? ukuthi kufanele kube khona i-engeli enethezekile ezihlakaleni zakho. Ngakho-ke, ngokuvamile, awufuni ukugoba izihlakala zakho kakhulu njengoba kungazithokozisa isikhathi eside. Kuphakathi phezulu noma phansi, uhlobo olunjalo.
Ngokuvamile, ufuna ukuthi izihlakala zakho zibe sesimweni sokungathathi hlangothi ukuze ushintsho olusuka kuma-handlebars ethu uye ku-brake hood yakho lukhululeke. Sinendatshana ekhuluma ngale ndaba okunikeza imininingwane ethile. Ngingakuzama manje.
Iphuzu lokuqala esizolimboza ububanzi be-barbar. Yebo, izibambo zomgwaqo zivame ukufika ngosayizi ukusuka kuma-intshi angama-38 kuye kwangama-46 ububanzi. Imvamisa, ungakhetha izibambo zakho ngokususelwa kubude bakho.
Ngaphandle kokuthi ukuphakama akuhlangene nakancane nakho, empeleni ububanzi bamahlombe akho. Ama-handlebars anobubanzi obulinganayo nebanga eliphakathi kwamajoyinti akho e-AC. Lezo yizicucu ezinamahlombe emahlombe akho.
Ngakho-ke lapho ugcina izibambo zakho zisehla, amaqakala akho asuke engekho olayini wehlombe. Ngiwuphendulile umbuzo wakho. Vele, uma ngingakafiki ukuphendula umbuzo wakho kuleli sonto qiniseka ukuthi uwubuyisele esigabeni sokuphawula ngezansi.
Futhi uma unombuzo omusha, noma omusha embukisweni, thumela imibuzo yakho esigabeni sokuphawula ngezansi, noma ezinkundleni zokuxhumana nge- # TorqueBack. Manje ngaphambi kokushiya le ndatshana qiniseka ukuthi ubhalisela i-GCN. Kulula, chofoza embulungeni bese uma ufuna okuqukethwe okwengeziwe manje mane uchofoze kuyo ukuthola umbukiso wethu wokubuka kuqala weTour de France? Njengoba kunikezwe ukuthi iqala kusasa, noma mhlawumbe vele, lapho ubuka le ndatshana, zigcine usesikhathini.
Futhi-ke, nge-classic kaDan noMat, izindlela eziyisishiyagalolunye zokuphuza ebhodleleni lakho lamanzi. Ubani owayengacabanga ukuthi kwakungaphezu kweyodwa? Vele uchofoze phansi lapho.
Ngabe kufanele ngisebenzise i-lube elimanzi noma elomile?
Ama-lubes owomilekungenxa yezimo ezome kakhulu futhi ezihlanzekileamaketanga.Ama-lubes amanzikungaba njaloesetshenzisiweunyaka wonke, nikeza inani elingcono futhi ube nesikhathi eside kakhulu. Noma ngabekumanzi noma komile, kuvame ukubuzwa ukuthi ufuna isikhathi esingakanani nomzamobekaNoma ngabe ikuphi, qiniseka ukuthisebenzisaukuigrisieyakhouchungechungengizokubonga ngakho!
Ingabe KULUNGILE ukusebenzisa i-WD40 kuketanga lebhayisikili?
Ngingasebenzisa i-WD-40ukwenza lube lwamiuchungechunge lwebhayisikili? Cha. Akufanele nezesebenzisa i-WD40njengobauchungechungeokokuthambisa kusukelaWD-40AKUYONA i-lubricant yangempela ngoba kuyisisekelosebenzisakufana ne-solvent noma i-rust dissolver.
Ungayisebenzisa i-WD-40 njenge-lube lube?
Akunjalo.Wenaakufanele nezesebenzisa i-WD40 njengeketangaokokuthambisa kusukelaWD-40AKUYONA i-lubricant yangempela ngoba kuyisisekelosebenzisakufana ne-solvent noma i-rust dissolver.
Ngingakwazi ukusebenzisa i-WD40 kuketanga lebhayisikili?
FuthaiIbhayisikili le-WD-40Degreaser ungene ebusweni bakhouchungechunge lwebhayisikilifuthi ulinike isikhathi esanele sokusebenza. Ngaphezu kwalokho, ifayela le-Ibhayisikili le-WD-40I-Degreasercankubeesetshenzisiwewokuhlanza kanye nokususa ezinye izingxenye ezihambayo.
Ngabe i-WD40 ilungile ngamaketanga ebhayisikili?
NgingasebenzisaWD-40ukwenza lube lwamiuchungechunge lwebhayisikili? Cha. Akufanele usebenziseWD40njengobauchungechungeokokuthambisa kusukelaWD-40AKUYONA i-lubricant yangempela ngoba ukusetshenziswa kwayo okuyinhloko kufana ne-solvent noma i-rust dissolver.
Uyini umehluko phakathi kwe-chain lube ne-wax wax?
Okuodwaumehluko phakathiyilezo fomu ezikhona laphouchungechunge lwe-waxiyezaku-ifomu lokunamathisela kanyeuchungechunge lubeiza ifomu eliwuketshezi / lokufafaza. Yandisa isikhathi sempilo ye-uchungechunge: akunandaba ukuthi ukhetha yiphi, zombili izindlela ze-i-waxfuthilubeNgabe uwoyela wakhouchungechungekahle futhi usize ukunciphisa ukungqubuzana.
Ngingawasebenzisa yini amafutha omnqumo ukuze ngibe lube uchungechunge lwebhayisikili lami?
Yebo, ngoba intombi eyengeziweAmafutha e-Oliveishumi auchungechunge lwebhayisikilikungcono kunokuthi chauwoyelakube bonke.Amafutha e-Oliveayisoze yaphumelela ngendlela efaneleuwoyela we-lube, kephacanusize kakhulu lapho usesimweni esiphuthumayo. Itcanuhlinzeke ngomphumela wesikhashana, othikufaneleyanele ukukuthola kufayela le-ibhayisikilithenga cishe ukulungiswa okufanele.
Ingabe lolu yi-lube lokugcina lamabhayisikili?
Ingabe lolu yi-lube lokugcina lamabhayisikili? - Imiphumela yokuhlolwa - i-YouTube Uma ukudlala kungaqali maduzane, zama ukuqala kabusha idivayisi yakho. Kwenzeke iphutha. Sicela uzame futhi emuva kwesikhathi. (I-ID yokudlala: PrJs6sUiv15Z1H1H) Amavidiyo owabukayo angezwa kumlando wokubuka we-TV futhi abe nomthelela ezincomweni ze-TV.
Iyini imiphumela yokuhlolwa kwe-lube?
- Imiphumela yokuhlolwa - i-YouTube Uma ukudlala kungaqali maduzane, zama ukuqala kabusha idivayisi yakho. Kwenzeke iphutha. Sicela uzame futhi emuva kwesikhathi. (I-ID yokudlala: PrJs6sUiv15Z1H1H) Amavidiyo owabukayo angezwa kumlando wokubuka we-TV futhi abe nomthelela ezincomweni ze-TV. Ukugwema lokhu, khansela bese ungena ngemvume ku-YouTube kwikhompyutha yakho.
Hlobo luni lwento yokugcoba okufanele ngiyisebenzise ku-Chain yami?
Qeda i-Line Lube Lube nge-PTFE kusuka kumamayela ayi-1000 - 2000, uShell Rotella T6 kusuka ku-2000 - 3000+ amamayela. Akukho mehluko enanini lokugqokwa kwamaketanga okwabonwa phakathi kwanoma iyiphi yalezi zikhathi kunoma yimaphi amaketanga akhombisa ukuthi uwoyela ophelele wezinjini usebenza kanye nebhodlela elincane elingu-4 ounce $ 11 likawoyela webhayisikili wenhloso ekhethekile.